ဂီတအကျိုးသက်ရောက်မှု & မြန်နှုန်းမြင့်စတန့်အဝေးထိန်းစနစ်ဖြင့် ၁:၁၆ Flash Twist RC ကားကို ၀ ယ်ပါ၊ ပို့ဆောင်ခအခမဲ့၊ အခွန်မပါ | WoopShop®
1:16 Music Effect & High Speed ​​Stunt Remote Control ပါသော Flash Twist RC Car
$66.99 ပုံမှန်စျေးနှုန်း $82.99
အရောင် အပြာရောင် 1 Remote လိမ္မော်ရောင် 1 ဝေးလံခေါင်သီ အပြာရောင်2Remote လိမ္မော်ရောင်2ဝေးလံခေါင်သီ အစိမ်းရောင်2Remote အစိမ်းရောင် 1 Remote
မှစ. သင်္ဘောများ ရုရှားပြည်ထောင်စု ချက်သမ္မတနိုင်ငံ တရုတ်နိုင်ငံ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု စပိန်
အပြာ ၁ အဝေးထိန်း / ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း အပြာရောင် ၁ အဝေးထိန်း / ချက်သမ္မတနိုင်ငံ လိမ္မော်ရောင် ၁ လံ / တရုတ် BLUE 1 အဝေးထိန်း / တရုတ် အပြာရောင် ၁ အဝေးထိန်း / ယူအက်စ် အပြာ ၁ အဝေးထိန်း / SPAIN လိမ္မော်ရောင် ၁ အဝေးထိန်း / ချက်သမ္မတနိုင်ငံ BLUE2အဝေးထိန်း / တရုတ် အပြာရောင် ၁ အဝေးထိန်း / ယူအက်စ် Orange 1 အဝေးထိန်း / ယူအက်စ် လိမ္မော်ရောင် ၁ အဝေးထိန်း / SPAIN လိမ္မော်ရောင် ၁ အဝေးထိန်း / ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း လိမ္မော်ရောင် ၁ အဝေးထိန်း / SPAIN လိမ္မော်ရောင် ၁ အဝေးထိန်း / ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း Green2အဝေးထိန်း / ချက်သမ္မတနိုင်ငံ လိမ္မော်ရောင် ၁ လံ / တရုတ် Orange2အဝေးထိန်း / ယူအက်စ် Green 1 အဝေးထိန်း / ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း Green 1 အဝေးထိန်း / ချက်သမ္မတနိုင်ငံ လိမ္မော်ရောင် ၁ အဝေးထိန်း / ချက်သမ္မတနိုင်ငံ Green 1 Remote / တရုတ် Green 1 အဝေးထိန်း / ယူအက်စ် အစိမ်းရောင် ၁ အဝေးထိန်း / SPAIN အပြာရောင် ၁ အဝေးထိန်း / ချက်သမ္မတနိုင်ငံ အပြာ ၁ အဝေးထိန်း / SPAIN အပြာ ၁ အဝေးထိန်း / ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း Green2အဝေးထိန်း / ယူအက်စ် အစိမ်းရောင် ၁ အဝေးထိန်း / SPAIN Green2အဝေးထိန်း / ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း Green2Remote / တရုတ်
1:16 Flash Effect Twist RC Car နှင့် Music Effect & High Speed ​​Stunt Remote Control - Orange 1 Remote / China backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
အသက်အရွယ်ကိုအကြံပြုပါ: ၇-၁၂ နှစ်၊ ၁၂+နှစ်
ပစ္စည်း: သတ္တု, ပလတ်စတစ်
Throttle servo: ပြထားသည့်အတိုင်း
စွမ်းအား: 3.7V 1500mah
Assembly of the State: အဆင်သင့်ဖြစ်ပါပြီ
ပျံသန်းချိန် - မိနစ် ၃၀ ခန့်
keywords: အဝေးထိန်းအဝေးထိန်း RC ကား၊ လက်ဟန်ခြေဟန်၊ တေးဂီတအလင်းရောင်၊ စတန့်ကား၊ လမ်းကြမ်းယာဉ်ယာဉ်၊ ကားပုံစံ၊ စတန့်ကား
ကုန်ပစ္စည်းအမည်: 1:16 တန့်လှည့်ကွက်ကား
ကုန်ပစ္စည်းအရွယ်အစား - ၃၁ * ၁၇ * ၉ စင်တီမီတာ
အထုပ်အရွယ်အစား 30.5 * 18 * 18.8cm
အရောင်: အပြာရောင်၊ အစိမ်း၊ လိမ္မော်ရောင်
အသုံးပြုချိန် - ၃၀ မိနစ်ခန့်
4 နာရီ: အချိန်အားသွင်း
ခန္ဓာကိုယ်ဘက်ထရီ: 3.7V 1500mah
အဝေးထိန်းဘက်ထရီ - ၂ AA (မပါ ၀ င်ပါ)
ကေဘယ်လ်ကြိုးအားသွင်း USB မှတ်
အဝေးထိန်းထိန်းချုပ်မှု - အလင်းရောင်၊ ဂီတ (ပြောင်းနိုင်သည်)၊ ရှေ့၊ နောက်သို့၊ ဘယ်ဘက်အလှည့်၊ ညာဘက်အလှည့်၊
ဝေးလံခေါင်သီထိန်းချုပ်မှုကိုစောင့်ကြည့်ပါ - ရှေ့၊ နောက်၊ လက်ဝဲအလှည့်၊ ညာအလှည့်၊ ဘယ်ဘက်လမ်းကြောင်း၊ ညာလမ်းကြောင်း၊ တည်နေရာဘယ်ဘက်အလှည့်၊ တည်နေရာညာဘက်အလှည့်၊ အပေါ်နှင့်အောက်လှည့်ကွက်တစ်ခုသော့ Dance Demonstration
မူရင်း Box ကို
оварпришелбыстро орошоупакован, непомят။ еотличноработает! ольнаямашинка! Сынунравится оветуем!
အားလုံးအဆင်ပြေတယ်။ သားလေးကအသက် ၁၀ နှစ်။ ဟုတ်တယ်၊ ငါအသက် ၅၀ မှာနှလုံးကနေမောင်းခဲ့တယ်
Sehr schön Danke woopshop!
တစ်ပတ်ခန့်နေ့ချင်းပြန်ပို့ပေးသည်။ ကလေးတွေကိုလက်ဆောင်အဖြစ်ငါဝယ်ခဲ့တယ်။ လက်ပတ်နာရီတစ်လုံးကို ယူ၍ ၎င်းတို့တွင် ၃ ဗို့ဘက်ထရီပါ ၀ င်သောကိရိယာ၌ဘက်ထရီမပါဘဲအဝေးထိန်းစနစ်လည်းမရှိ။ ပြီးတော့ငါတို့တင်ပြမယ်နောက်မှတွေ့မယ်။ လက်ပတ်နာရီထဲမှဘက်ထရီအားတွေ့ရှိသဖြင့်ချက်ချင်းမမြင်နိုင်ချေ